မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ အားကစားဖိနပ် အားကစားရုံကိုသွားဘို့အသီးသန့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဖိနပ်သို့မဟုတ် Sneaker running အတွက်လမ်းမများပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းသောမကောင်းတဲ့အရသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် platform ပေါ်တွင်ပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ် Isabel Marant Sneaker တစ်ဦးအလင်းလက်နှင့်အတူဘဝကိုဖက်ရှင်သို့ပြင်းစွာတိုက်များနှင့်လုံးဝဖက်ရှင်၏အဟောင်းစိတ်ကူးလှည့်။
ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အမျိုးသမီးများ Sneaker: အင်္ဂါရပ်များ
ဒါကစိတ်ကူးအများအပြားအမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့နီးပါးတိုင်းဖက်ရှင်ရှိုးပလက်ဖောင်း Sneaker Sneaker တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် - စင်မြင့်ပေါ်နှင့်ပရိသတ်ကိုရော။ ဖိနပ်၏ဤမျိုး၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလူကြိုက်များကဘာလဲ? စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာ - သူတို့ရဲ့ဘက်စုံသုံး။ မဆိုပလက်ဖောင်းဖိနပ်နှင့်ဝသကဲ့သို့, Sneaker တစ်ကြိမ်မှာအတော်ကြာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်တစ်ဦးကိုနှစ်သက် ပလက်ဖောင်းဘဝါး ဒီဖိနပ်က hidden ပလက်ဖောင်းကြောင့် fit ။ ပေါ့ပေါ့ပြိုင်ကားဆန်သောသို့မဟုတ်အခမဲ့ကိုယ်စားလှယ်များလည်းသင်အကြိုက်ဆုံးဒီဇိုင်းဖိနပ်ကိုရှာဖွေနိုင်ကြသည်။ ထိုအခါ platform ပေါ်တွင်အမျိုးသမီး Sneaker အဖြစ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ပါကဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ဘောင်းဘီရှည်, ဒါပေမယ့်လည်းအဝတ်နှင့်အတူမသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပလက်ဖောင်းပေါ် Sneaker, အဘယ်ကြောင့်ငါမဝယ်သင့်သလဲ
၏သင်တန်း၏လူကြိုက်များင်း၏အမှတ်အသားအရွက်နှင့်ကဖိနပ်ဒီလိုမျိုး၌တည်ရှိ၏တချို့မိန်းကလေးတွေတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ သို့သော်ဘုံ Sneaker တစ် platform ပေါ်တွင် Sneaker Sneaker ခွဲခြားသောသက်သာခြင်းနှင့်အဆင်ပြေအန္တရာယ်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။ ခြေထောက်သူတို့ကို fixed မဟုတ်ပါက springy ဖြစ်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်နေဆဲအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလုံခြုံစွာသော်လည်းတနေ့လုံးသူတို့ကို၌ကျင်လည်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် platform ပေါ်တွင်အမျိုးသမီး Sneaker အမြင်အာရုံဟာ silhouette ပါးလျစေဖို့အတွက်ခြေထောက်ရှည်စေရန်ကူညီပေးသည်သောဖိနပ်ဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာမော်ဒယ်မြင့်နောက်ခံနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ် leggings နှင့်အတူလူငယ်နှင့်အားကစားများ၏ပလက်ဖောင်းကြည့်အပေါ် Sneaker sneakers ။ ပိုများသောဣတ္ဂျ - ထိုးပြီး elongated အအဝတ်နှင့်ဆင်မြန်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်။ ဿုံတော်ပါတယ်ခြုံငုံနှင့်တိုတောင်းသောမိုးပြာရောင်အဝတ်နှင့်ဆင်မြန်း။
Basque နှင့်အတူဂျာကင်အင်္ကျီ - တိုင်းအရသာအဘို့ 45 စတိုင်ပုံရိပ်တွေ
သားသမီးတို့အဘို့ Pulmicort မွှန် - ညွှန်ကြားချက်, သောက်သုံးသော
ခင်ပွန်းစသောအပြောင်းအလဲများနှင့် cheat နားလည်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Nike က Air ကိုမက်စ် 2016
ဟယ်လင် Mirren ရုရှားနိုင်ငံအဘို့အတောငျ့အကြောင်းကိုပြောပြသည်
ရည်အတွက် apricot ယို - စာရွက်
10 ကီလိုဂရမ်အဘို့အသခွားသီး Slim အစားအသောက်များတွင်